Thiago, Naby Keita, Jordan Henderson Iyo Waqtiga Ay Soo
The United States militia pledges to combat al-Shabaab from
Liverpool ayaa Sabtida berri oo waqti hore ah waxay u tegi doontaa Brighton xilli ay jiraan dhaawacyo tiro badan oo aan fursad u haysanin kulankan.
Safka Thomas Tuchel
Doorka daaha gadaashiisa loogu talagalay Petr Cech
Reds ayay nasiib-darradu kusii socotay ciyaartii Axaddii ay Leicester City ku qaabileen, waxaana dhaawac kaga baxay Naby Keita oo muruqa waxyeello kasoo gaadhay.
Tababare Jurgen Klopp ayay kooxdiisa ayuu dhaawacan ugu dambeeyey ugu biiray dersin ciyaartoydiisa ah oo bannaanka hore uga joogay garoomada, sida Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Trent Alexander-Arnold iyo Joe Gomez.
Liverpool ayaa qaar ka mid ah ciyaartoydeeda dhaawaca lagu wargeliyey inay xili ciyaareedka oo dhan maqnaanayaan balse xiddigaha aanu dhaawacoodu cuslayn ayaa laga sugayaa inay Anfield kusoo noqdaan.
Wargeyska Liverpool Echo ayaa daabacay xogtii u dambaysay ee ciyaartoyda dhaawaca ka ah Liverpool.
Naby Keita – Daqiiqaddii 54aad ee ciyaartii Leicester City ay 3-0 ku garaaceen ayuu Naby Keita dhaawac uga baxay, waxaanu dhaawaciisu yimid isagoo laba ciyaarood oo xidhiidh ah u saftay qarankiisa Guinea labadii usbuuc ee ka horreeyey. Tababare Klopp oo wax laga weydiiyey ayaa sheegtay in aanu wax war ah ka haynin waqtiga uu soo laaban doono.
Xherdan Shaqiri – Waddankiisa ayuu kusoo dhaawacmay, waxaan abaadhitaan lagu sameeyey lagu ogaaday inuu muruqa wax ka qabo, taas darteedna looga reebay kulankii Leicester City.
Liverpool ilaa hadda war rasmi ah kamay soo saarin waqtiga suurtogalka ah ee uu kusoo laaban doono garoomada, waxaana kaliya la ogyahay inuu seegay ciyaartii Atalanta, sidoo kalena aanu taam u ahayn ciyaarta Brighton.
Jordan Henderson – Kabtanka Liverpool ayuu dhaawac kasoo gaadhay ciyaartii England iyo Belgium ee horraantii bishan November, iyadoo beddel lagu saaray waqtigii nasashada.
Tababarka kooxdiisa ayuu dib ugu soo laabtay Khamiistii, balse tababare Jurgen Klopp ayaa shaaciyey inay qiimayn ku samayn doonaan ka hor kulanka Brighton haddii uu ciyaari karayo iyo in kale.
Thiago Alcantara – Laacibkan ayuu dhaawac kasoo gaadhay ciyaartii Merseyside derby ee Everton ee bishii October, waxaana ugu dambaysay garoomada ciyaartaas.
Jurgen Klopp oo wax alga weydiiyey ayaa sheegay inuu u dhow yahay inuu soo laabto balse ma xaqiijin waqti rasmi ah, isagoo kaliya ku gaabsaday inay qiimayn doonaan dhamaan ciyaartoyda dhaawac ka hor kulanka Brighton oo kuwa taamka noqda ay ciyaari doonaan.
Trent Alexander-Arnold – Kulankii Man City ay barbarraha 1-1 ku kala baxeen ayuu muruqa lugta midig dhaawac kasoo gaadhay, waxaana lagu qiyaasay waqtiga soo kabashadiisa muddo afar usbuuc ah. Wali waxa uu ka maqan yahay tababarka kooxdiisa oo aanu kusoo labanin.
Si kastaba, waxa la filayaa inuu taam u noqon doono ciyaarta FC Midtjylland ee December 9.
Alex Oxlade-Chamberlain – Jurgen Klopp oo wax laga weydiiyey waxa uu ku gaabsaday in qiimayn lagu samaynayo xaalkiisa, balse uu kasoo dhow yahay sidii hore.
Joe Gomez & Virgil van Dijk – Lama hubo waqti go’an balse Gomez ayaa shan illaa lix bilood maqnaanaya halka Van Dijk uu toddoba illaa siddeed bilood ku maqnaanayo dhaawac. Labadan ciyaartoyba waxa lagu sameeyey qalliin, lamana filayo inay xili ciyaareedkan kasoo gaadhaan.
axadle 6303 posts
5 the explanation why your home made espresso tastes terrible
The UN is worried about the fate of several Ethiopian soldiers on peacekeeping missions